Sony wepụrụ obere ngwa site na usoro X X | Gam akporosis
Sony wepu Obere ngwa site na usoro X X nke ekwentị
Ọ bụ afọ siri ike maka Sony na a akara ọhụrụ nke smartphones akpọ Xperia X na nke ahụ abịa iji dochie Z. O nwekwara ihe omume a na-atụghị anya ya nke nwere ike iweta nsogbu karịa ka a tụrụ anya, anyị mụtara na nso nso a na igwefoto Xperia X ọ na-akpata mmechi a na-atụghị anya ya n'ihi oke ikpo ọkụ nke ọnụ na-ewe mgbe ị na-eji atụmatụ a dị oke mkpa maka onye ọrụ.
N'ime mkpebi ndị ahụ siri ike ị na-eme n'ihe metụtara nkewa mkpanaka gị, ugbu a anyị nwetara ozi ọzọ nwere ike ịdị ka ite mmiri oyi maka ụfọdụ ndị ọrụ. Ma ọ bụ na Sony kpebiri wepu Obere Ngwa site na akara ọhụrụ ya Ekwentị Xperia X. Ngwa ndị a na-eme ka ohere ịnweta ụfọdụ ọrụ ndị dị mkpa na ekwentị nwere uru nke ime ka ha na-ese n'elu desktọọpụ iji nweta ha n'oge niile.
Ngwa ngwa ndị a bụ akụkụ nke smartphone multitasking site na Sony na ha agaghị enwe ike ịhụ na akara ọhụrụ nke mobiles nke na-enweghị ike iji ihe mgbako, ndetu, ihe ndekọ ederede ma ọ bụ elekere nkwụsị.
Ozi a bụ kwadoro site na otu onye otu site n'aka ndị nkwado Sony Xperia na ụlọ ọrụ mkparịta ụka ekwentị. O kwukwara na ọ bụ n'ihi nkọwa na otu Google si kọwaa ya. Yabụ, anyị nwere obere obi abụọ gbasara ọnọdụ nke nkwupụta ahụ yana maka atụmatụ a maka ịmị ọtụtụ ihe na Sony Small Apps.
Ikekwe ọ metụtara ụfọdụ ọrụ Google na-etinye n'ọrụ na ikukota na ndị "Obere Ngwa", dị ka ọnọdụ Stamina na ọnọdụ ụra. Nke ahụ Ọnọdụ Stamina alaghachila na Xperia Z5, ma n'ụzọ dịtụ iche karịa ka ọ dị tupu ewepụrụ ya site na igwe ngagharị dị elu nke ndị nrụpụta Japan.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Sony wepu Obere ngwa site na usoro X X nke ekwentị
Budata Asphalt Nitro ugbu a, "Asphalt 8 Lite" nke emere maka ndị na-enweghị ọnụ na obere ihe
Etu ị ga-esi ege ntị ma hichapụ ihe niile ị gwara Google